On June 25, 2014 By svirorist
Ndakafonera sahwira foni yavo ikaenda kuVoice Mail. Ndokuzamazve ikarambazve. Ndokufona landline ndikadavirwa naFlorence akati baba vaenda kumapurazi kunotsvaka madhonza avo. Mapurazi aiva chinhambwe chingangoita makilometre gumi namashanu. Florence akati vanga vachangobuda. Ndakamubvunza kuti koFoni yavo vanayo here iye akati yanga yapera moto saka vatoisiya paSolar Charger muKitchen.
Sahwira wababa “ (SW)”: Saka unani ipapo?
Ndakabata mazamo aFlorence ndokuchimukisazve ndobva atanga kufemereka sembudzi yazvimbirwa nenyema. Pandakaisa munwe pabeche rake akatundazve. Beche rake ranga risati rambosvirwa. Mhandara izere zvayo. Ndakaisa Mboro pamusoro pezvimatinji zvake. Ndisati ndambokoira akabva andikisazve akati…ndinoda mundisvire kusvika mangwana.
Ndakaita zvokuita zvishoma zvishoma achingotunda. Pandainge ndoona ava kuzhamba nokurwadziwa ndombomira kwechinguva…ndoisazve mboro mubeche ndokoira..oyundazve..ndombomira…Pandakazoona kuti baba vake vangazodzoka ndakamuti….Ndichauya na11PM nhasi sezvo bedroom rake ririkure nedzimwe dzimba uye imbwa dzavo dzaisandihukura. Akati achatondimirira pazimuchakata ririkunze komusha na1045PM.
PREVIOUS POST Previous post: Kusvirwa neRoja repamba pedu
NEXT POST Next post: Today’s position for the ladies mubhedrumu